Thenga iPriridoxal hydrochloride powder (65-22-5) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Pyridoxal hydrochloride powder
SKU: 65-22-5. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-phosphox hydrochloride powder (65-22-5), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
IPyridoxine HCl powder i-hydrochloride ityuwa ye-Vitamin B6. Xa isetyenziswe ngokwemvelo emzimbeni, iPyridoxine incedisa ukulinganisa i-sodium ne-potassium kunye nokukhuthaza ukuveliswa kweeseli zegazi. Kuye kucatshangelwa ukuba iyithintelo yokukhupha, i-eczema, ne-psoriasis, ngokwe-Wikipedia.
Ividiyo yePyridoxal hydrochloride
Pyridoxal hydrochloride Abalinganiswa basisiseko
igama: Pyridoxal hydrochloride
I-molecular Formula: C8H10ClNO3
Isisindo somzimba: 203.62
Melt Point: 159 ku-162 ° C
umbala: I-White okanye i-Crystalline emhlophe
Umjikelezo wePyridoxal hydrochloride
I-BRON (BR): I-Pyridoxal hydrochloride
IGAMA JIKELELE (S): Pyridoxal HCL
I-Pyridoxal hydrochloride Ukusetyenziswa
Ngaphandle kokuba uthatha iyeza elithintela i-vitamin B6 kwaye ayichithisi amanye amavithamini B (njenge-penicillamine okanye i-Isoniazid), kufuneka uthathe ifom ye "B epheleleyo". Kungenxa yokuba i-vithamini B isebenza kunye. Nazi ezinye izibonelo:
Umzimba wakho unokuhlawulela ukukhubazeka kwe-niacin kunye ne-pyridoxine.
Ukulawulwa kwe-homocysteine, into evuzayo ehambelana nesifo senhliziyo kunye ne-Alzheimer's, incike kwi-pyridoxine (B6), i-niacin (i-B3) kunye ne-cobalamine (B12).
Abantu abanamaqondo aphantsi e-B6 basengozini enkulu yesifo senhliziyo, kodwa izifo zesifo esingazange siye ngaphandle kokuba zifumana zombini i-B6 kunye ne-folic acid.
Iyiphi imilinganiselo yePyridoxal hydrochloride
Ubuncinane be-B6 efunekayo ukukhusela ukusilela malunga ne-1.7 milligrams ngosuku kwiidala ezidala. Ungayifumana loo nto kwiintlobo ezintathu zokutya eziqingqiweyo kunye / okanye isinkwa esimhlophe.
Nangona kunjalo, ukuba ufumane i-vitamin B6 eninzi kwindawo yokutya engaqinisekanga, kufuneka udle:
I-10 oz (i-280 grams) yenkukhu yokutya okukhanyayo (ephekwe), okanye
I-11 oz (i-308 grams) ye-salmon ephekwe, okanye
Iibhanana ze-4, okanye
I-2-1 / 2 iizambatho ezibhaka, kunye nekhanda, okanye
Iprojekthi ye-1 yesipinashi eluhlaza
Ngenxa yokuba abaninzi abantu badla ukutya okuninzi okuninzi kunye nokutya, i-vitamin B6 ayinqabile-ngaphandle kokuba wenza into efanelekileyo ngokutya konke-kwendalo!
Indlela iPriridoxal hydrochloride isebenza ngayo
I-Pyridoxine HCl iyityuwa le-hydrochloride ye-Vitamin B6. Xa isetyenziselwa ngokwemvelo emzimbeni, i-Pyridoxine incedisa ukulinganisa i-sodium ne-potassium kwakunye nokukhuthaza ukuveliswa kweeseli zegazi. Kuye kucatshangelwa ukuba yinto yokuthintela i-dandruff, eczema, ne-psoriasis, ngokwe-Wikipedia. Kwakhona kucatshangelwa ukuba kunezixhobo ezinxamnye ne-bacteria kunye ne-antioxidant xa zisetyenziswe ngokusemgangathweni kwesikhumba, nangona kukho uphando oluncinci lokuqinisekisa ezi zibango (CosmeticsCop.com). Nangona i-Vitamin B6 ngokwayo ayithandwanga ngokukodwa nokunyamekelwa kwesikhumba xa isetyenziselwa i-topically, ukusilela kungakhokelela kwiingxaki zesikhumba, kubandakanywa noxilongo lwe-dermatitis, ukucaphukisa, i-eczema kunye ne-blistering (iHealthDirectory.com).
I-Vitamin B6 ingafumaneka ngokwemvelo kwii-grain, ubhontshisi, imifuno, iimveliso zansuku zonke, amaqanda, intlanzi, inyama kunye nomgubo, kodwa i-Pyridoxine ifumaneka ngokwemvelo kwiziqhamo ezimbalwa, kubandakanywa iziqhamo zesantya ezivela eMzantsi-mpuma Asia. Kwizicumbiso kunye nemveliso yokunyamekela, iPyridoxine isetyenziswe njenge-ejenti yesikhumba neenwele, kwaye ifumaneka kwiindidi ezahlukahlukeneyo, kubandakanya iimveliso zokuhlamba, isepha kunye nezinto zokuhlamba, iimveliso zokuhlanjululwa, iimveliso zokunakekelwa kweenwele kunye nokunyamekelwa kwesikhumba.
Iinzuzo zePyridoxal hydrochloride
Njengoko ungazifumana kwenye indawo kule ndawo, ukuxhaswa kwe-B6 kunokunceda kwi-acne / rosacea, i-autism, ingxaki yokukhathazeka kwengxaki kunye nokugqithiseleka kwengxaki-ingxaki yokuxhatshazwa kwemvelo (ADHD), i-rheumatoid arthritis, i-allergies, ukuxinezeleka, i-homocysteine ​​ephezulu, isifo senhliziyo, amaqondo aphakamileyo e-lipid , ukuxinezeleka komzimba, ukugula kwesantya, ukuxinezeleka okuhlobene nokukhulelwa, ukuxinezeleka okunxulumene nokusetyenziswa komlomo ngomlomo, isifo se-premenstrual kunye nesifo sokugula esisengaphambili, iimpawu zokumelana nokuphuma komntu, ukunyuka kwengqondo kunye nokulahleka kwememori engabangelwa yi-Alzheimer's, imisipha yomlomo, i-conjunctivitis, izifo ezifayo, isifo segazi esiphezulu, ukugcinwa kwamanzi, isifo sesifo sesifo sikashukela, isifo se-asthma, i-carpal tunnel syndrome, i-canker zilonda (i-aphthous ulcers), iintlobo ezininzi ze-schizophrenia, i-vertigo, kunye nokugqithisa.
I-Pyridoxal Hydrochloride Marketing
Uhlolo lwe-Pyridoxal hydrochloride
Yintoni i-pyridoxine hydrochloride? I-Pyridoxine yindlela ye-vitamin B6 ezenziwe izityalo, ingakumbi kwintsholongwane yengqolowa, ilayisi kunye nengqolowa. I-Pyridoxine hydrochloride, eyaziwa nangokuthi i-pyridoxine i-HCl, iyomileyo, emhlophe engasetyenziselwa ukwenza izongezelelo ze-vitamin B ezidlulileyo ixesha elide kakhulu njengoko uzigcina kwi-shelf.
Phantse wonke umntu ufumana i-B6 eyaneleyo ukukhusela iimpawu ezinokungazinzi ezifana nemilomo ehlambulukileyo, iinkophe ezivuvukileyo, kunye nokulala, kodwa akusiwo wonke umntu ofumana i-vitamin B6 eyaneleyo yokuphulukana ngokuthe ngqo kwizifo. Nazi izinto ezintathu umntu ofuna ukuba azi malunga ne-pyridoxine i-hydrochloride esebenzisa izibonelelo zokulwa nezifo kwaye ugcine unempilweni.
Indlela yokuthenga iPyridoxal hydrochloride evela kwi-AASraw
I-Pyridoxal hydrochloride Recipes